खुल्यो आजबाट साहस उर्जाको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्दा ठिक? – Eps Sathi
September 22, 2021 390
साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ नि’ष्काशन आजबाट गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ नि’ष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर नि’ष्काशन गर्नेछ।
नि’ष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओ नि’ष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपि आईआर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायि’त्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ।
कम्पनीको धितोपत्र नि’ष्का’शन तथा बि;क्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
Prevकोरियामा कुकुर तथा बिरालो आयात बढ्दो, २ बर्षयता आयात दोब्बर
Nextकोरियामा बढ्ने भयो बिजुलीको भाउ, कति बढ्दैछ हेरौं